How can I fly ?
နှလုံးသား ဘာသာပြန်သော ခါးခါး
မိုးရာသီမှာ လူတွေအတွက် လူဆိုတာက ချစ်သူနဲ့ဝေးနေတဲ့ သူများ အတွက်ကိုဆိုလိုတာပါ လွမ်းဆွေးဖို့ကောင်းတဲ့ရာသီလေး တစ်ခု ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကိုယ်မယုံမိဘူး အခုတော့ ချစ်သူနဲ့တွေ့တဲ့နေ့မှစပြီးတော့ အလွမ်းဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုကို ခံစားတတ်ခဲ့ပါပြီ မိုးလေးအုံ့ပြီးတော့ ရွာမလိုလိုနဲ့ ညာသံပေးနေတဲ့ မိုးနတ်မင်းကို တစ်ခါတစ်လေ မျက်စောင်းခဲမိချင်သေး ချစ်သူကို သတိရအောင်လုပ်ပေးလို့ပါ အနေဝေးနေတဲ့အတွက် လွမ်းငွေ့တဝေေ၀ဖြစ်နေရတဲ့သူကိုမှမစာနာ ခုလိုမျိုး နှိပ်စက်နေရလားဆိုပြီးတော့ပေါ့ ချစ်သူနဲ့စသိခဲ့တဲ့အချိန်က ည အဲဒီနေ့ညမှာ မိုးတွေမရွာပါဘူး ဒါပေမယ့် အေးစိမ့်စိမ့်လေးတော့ရှိတယ် ချစ်သူနစ်လေးကိုကိုယ်အက်လိုက်မိတယ် ညက ဖေဖော်ဝါရီ 19 ရက်နေ့ပါ အချစ်တွေနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့ လလည်းဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာပေ့ါ ည10ခွဲ ကျော်လောက်မှာ ချစ်သူက အွန်လိုင်းပေါ်ပုံမှန်တက်နေကျ သူနဲ့လည်းအမြဲတမ်း အဲဒီအချိန်မှာ နှုတ်ဆက်နေကျ အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ ချစ်သူနဲ့ ကိုယ့်ဟာ သာမန် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ စကားတွေပြောဖြစ်တယ် ရန်ဖြစ်တယ် ကိုယ့်နာမည်ကို သူက ဝေဖန်တဲ့အတွက် မကျေနပ်လို့ အစက ဘလောက်တောင် လုပ်ပစ်မလို့ အဲဒီအထိ ချစ်သူကို စိတ်တွေဆိုးခဲ့မိတယ် အမှန်တော့ ချစ်သူဟာ သူများကိုပျော်ရွှင်အောင် လုပ်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မှန်း အစကသိခဲ့ရင် အရင်ကကိုယ့်လုပ်ရပ်အတွက် ချစ်သူကို အားတုံ့အားနာ ဖြစ်မိပါရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်းအပြစ်တင်မိတယ် ချစ်သူနဲ့တွေ့ရင် တစ်ခါတစ်လေ စကားမပြောဖြစ်ဘူး သူ့ကိုလျစ်လျူရှုမိတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်အခါခါပါပဲ ကိုယ့်ဖုန်းနံပတ်ကိုတောင်းတော့လည်းမပေးမိဘူး ဒီလုပ်ရပ်ဟာ ချစ်သူကို ဘယ်လောက်တောင် နာကျင်စေမလဲဆိုတာ အစကသာတွေးမိမယ်ဆိုရင်ပေါ့ မတ်လ 26ရက်နေ့မှာ မထင်မှတ်ပဲ ချစ်သူအကောင့်နဲ့ သူ့မမ တက်လာတယ် ကိုယ်လည်းမထင်ဘူးလေ ချစ်သူကဒီချိန်ဘာလို့တက်လာပါလိမ့်ဆိုပြီး စနောက်မိတယ် ဟိုဘက်လည်းပြန်စလာတော့ ဒါဟာချစ်သူမဖြစ်နိုင်ဘူး ဘယ်သူက ချစ်သူအကောင့်ကိုသုံးနေလည်း ဆိုပြီးတော့ စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့အော်ခဲ့မိတယ် နောက်မှချစ်သူအစ်မမှန်းသိတော့ အားနာနာနဲ့ တောင်းပန်မိတယ် တစ်ကယ်မထင်မှတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါပဲ ချစ်သူမှာ အရင်က အရမ်းချစ်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပဲ အခုအဲဒီကောင်မလေး ဆုံးလို့ သူ့ရဲ့ (၂) နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်လေးကို ချစ်သူက လာတာတဲ့လေ ဒါတွေအားလုံးကို ချစ်သူအစ်မ ပြန်ပြောပြမှသိခဲ့ရတာပါ ကိုယ့်ကို ချစ်သူကိုယ်တိုင်က ဖွင့်မပြောရက်လို့ အခုလိုမျိုး သူ့မမလေးကို သူ့ရဲ့ကိုယ်စား လာပြောပြခိုင်းတယ်လို့တော့ ထင်တာပဲလေ ဘာဖြစ်ဖြစ် စိတ်မကောင်းဘူး ချစ်သူဟာ သူ့ကောင်မလေးကို အခုထိ မမေ့နိုင်သေးတဲ့အကြောင်း ချစ်သူရဲ့ အစ်မက ပြောတော့ ပိုပြီး သနားလာတယ် ကိုယ်ချင်းလည်း အလိုလိုစာတတ်လာတယ် ချစ်သူဘယ်လောက်ခံစားနေရမလဲ ဘယ်လောက်ကြေကွဲနေရမလဲဆိုတာကို မြင်ယောင်ပြီး ရင်ထဲမှာ ဆို့တက်လာတဲ့ခံစားချက်ကို မျိုချကာ ချစ်သူကို နှစ်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားရတာပေါ့ ဒါပေမယ့် အချည်းနှီးပါ ချစ်သူဟာ ကိုယ့်ကို စကားတောင်ပြန်မပြောနိုင်လောက်အောင်ကိုနာကျင်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာ အဲဒီအချိန်တုန်းက မတွေးမိပဲနဲ့ ချစ်သူကိုအထင်လွဲခဲ့တာလည်း အခါခါပါပဲ သူ့ကောင်မလေးလောက်တောင် ငါ့ကိုအလေးမထားဘူး ဆိုပြီးတော့လည်း ၀မ်းနည်းမိတယ် ချစ်သူကိုလည်း ဘယ်တော့မှမခေါ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီး messageပို့ခဲ့မိတယ် ဒါပေမယ့်ကိုယ်ထင်တာတလွဲတွေပဲဆိုတာ နောက်မှချစ်သူရဲ့ message လေးမြင်မှ အသိတရားရမိတယ် ချစ်သူဟာတစ်ချိန်က သူ့ကောင်မလေးနဲ့ သိပ်ချစ်နေရဲ့နဲ့ ရုတ်တရက်ကြီးခွဲခွာသွားတော့ ဘယ်သူမဆို အနဲနဲ့အများတော့ ခံစားမိမှာပဲဆိုပြီးတော့ ချစ်သူရဲ့ ခံစားချက်တွေဘယ်လောက်ပြင်းထန်သလဲဆိုတာ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ချင်းစာတတ်လာတယ် ချစ်သူကို ခုလိုအချိန်မှာ ပိုပြီး အားပေးသင့်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သဘောပေါက်လာတယ် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ချစ်သူကို အလိုလိုနေရင်း သနားလာမိတယ်…………
ချစ်သူက ကိုယ့်ကို နောက်၂ရက်၃ရက်ကြာမှ စကားတွေပြန်ပြောလာတယ် သူ့ခံစားချက်လည်း နဲနဲသွေးအေးသွားလို့ဖြစ်မှာပါ အဲဒီချိန်ကနေစပြီး ချစ်သူကို အားပေးဖို့ နှစ်သိမ့်ဖို့ အင်အားတွေပိုလာမိတယ် အရင်ကတစ်ခါမှ မပေးဘူးတဲ့ ဖုန်းနံပတ်ကိုလည်း ချစ်သူကိုပေးခဲ့မိတယ် သူနဲ့စကားတွေပြောချင်တဲ့စိတ်က အတားအဆီးမဲ့ဖြစ်လာလို့ပါ ချစ်သူမှာ သိပ်ချစ်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ မနာလို အူတို တတ်တဲ့ စိတ်ရိုင်းလေး ကလည်း ဘယ်ချိန်တုန်းက စိတ်ထဲလာပြီးခိုအောင်းနေမှန်းမသိတော့ပေ အခုချစ်သူရဲ့ဟာနေတဲ့နှလုံးသားကွက်လပ်ထဲမှာ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းပဲ အပိုင်စီးထားချင်တဲ့စိတ်တွေ အလိုလိုပေါ်လာတယ် မထင်မှတ်တဲ့နေ့လေးမှာပဲ ချစ်သူဟာ ကိုယ့်ကို ချစ်တယ်တဲ့ ဒီစကားဘယ်တော့မှမကြားရတော့ဘူးလို့ ထင်နေတဲ့ ကိုယ်ဟာ မှိုရတဲ့မျက်နှာနဲ့ လအစင်းပေါင်း တစ်ရာလောက် ထွန်းလင်းတောက်ပမှု ပေးထားတဲ့မျက်နှာနဲ့ပေါ့ ဒီတစ်ကမ္ဘာမှာ ကိုယ့်လောက်ပျော်တာဘယ်သူများရှိအုံးမလဲလို့လေ ဒါပေမယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်အတွေးထဲမှာ ချစ်သူဟာ အရင်ကသိပ်ချစ်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးရှိတယ်ဆိုတာ ခဏလေးတော့ မေ့သွားတယ် သတိရချိန်မှာ ချစ်သူကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးနဲ့ငြင်းရမလဲဆိုတာ အချိန်ချိန်အခါခါ အဖြေထုတ်ခဲ့မိတယ် ကိုယ့်မှာလည်း အရင်ကတည်းက ကျန်းမာရေးညံ့ဖျင်း ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့လည်း ချစ်သူကိုနောက်တစ်ဖန် မနာကျင်စေချင်တာလည်း ပါတာပေါ့ချစ်သူရယ်
ချစ်သူကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ငြင်းဆန်ခဲ့ပေမယ့် နှလုံးသားကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ ဂျူလိုင် ၁၁ ရက်နေ့မှာတော့ အဖြေပေးလိုက်မိတယ် ချစ်သူကို နောက်ထပ် ကိုယ့်အတွက်နဲ့ မခံစားစေချင်လို့ပါ အလုပ်အရမ်းများနေတဲ့ကြားက ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်း တဖွဖွပြောနေတဲ့ချစ်သူကို သနားမိတဲ့နှလုံးသား ကြောင့်လည်း ပါမှာပါ ချစ်သူဟာအရင် ကိုယ်နဲ့မတွေ့ခင်အချိန်ထိ ကောင်မလေးဆုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ အထီးကျန်ဆန်လွန်းတဲ့နေ့ရက်တွေကို ပင်ပန်းစွာ ဖြတ်သန်းရင်း စိတ်ကို အလုပ်ထဲမှာပဲနှစ်ထားပြီး ၀မ်းနည်းအားငယ်နေတဲ့အချိန်တွေကို ထပ်မကြုံစေချင်လို့ ပြီးတော့ ချစ်သူကို ငြင်းဆန်ဖို့ ဓိကျတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှာမရတာလည်းပါတယ် အရင်ကတော့ ကလေးဆိုးကြီးတစ်ယောက်လို ချစ်သူကို ဟိုကောင်မလေးနဲ့စွပ်စွဲလိုက် သ၀န်တိုပြလိုက်နဲ့ အမျိုးမျိုး ငြင်းဆန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို သီးခံရင်း ကိုယ့်ဆီကချစ်အဖြေလေးကြားရဖို့ စိတ်ရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ချစ်သူကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာလာတယ် ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ချစ်သူက အရာရာအလျှော့ပေးနေတယ်ဆိုတာကို သိသိကြီးနဲ့အနိုင်ယူမိတဲ့အတွက်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် ချစ်သူရဲ့ စိတ်ကို လိုက်လျှော ပေးတာဆိုလို့ တစ်ခုပဲရှိခဲ့ပါတယ် အဲဒါကတော့ ချစ်သူက သူ့ကို “......“လို့ခေါ်စေချင်တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ် အဲဒီစကားလေးတစ်ခွန်းကိုခေါ်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ်ကလနဲ့ချီပြီးအချိန်ဆွဲခဲ့မိသေးတယ် အဲလိုစကားလုံးကြီးကို တစ်သက်လုံးမခေါ်ဘူးလို့ သန္ဓိဌာန် ချထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း တွေဝေမှုတွေနဲ့ ကြီးဆိုးခဲ့တာပါ နောက်မှ ချစ်သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ အနာတစ်ခုတောင်မကျက်သေးပါလား ဒါကိုကိုယ်က ထပ်ပြီးနာကျင်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကို စဉ်းစားမိပြီးတော့ ချစ်သူကို “မောင်“ လို့ခေါ်ခဲ့မိတယ် အခုတော့လည်း ချစ်သူကို အဝေးကနေပဲချစ်နေရပေမယ့် ကျေနပ်ပါတယ် ရှေ့ဆက် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ ချစ်သူပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာမို့ အခုတော့ သြဂုတ်လရဲ့ မိုးရာသီနဲ့အတူ ချစ်သူကို လွမ်းရပေအုံးမည်…………………..
ပို့ သူ ခါးခါး ဒီချိန် 12:03 AM No comments:
^_^၂၀၀၉ ရဲ့ဘုရင် အီမိုဖီလင် ^_^
၂၁ရာစုထဲကအချစ်တစ်ခုကို အသစ်အဆန်းလေးများဖြစ်မလားဆို လက်တည့်စမ်းတာမဟုတ်
တစ်ကယ်ချစ်လို့ တစ်ကယ်ရင်ခုန်လို့ တစ်ကယ်မြတ်နှိုးလို့ မင်းကိုတန်ဖိုးထားလို့….
ကြားကာလလေးမှာ ချစ်သူနဲ့တူတူ ပျော်ရွှင်စွာကုန်ဆုံးချင်တာသဘာဝကျပါတယ်
မင်းကိုချစ်ဖို့ ငါဘယ်သူ့ဆီကမှ ပါမစ် မတောင်းခဲ့သလို အယူခံလည်းမ၀င်ခဲ့ဘူး
ရိုမီယိုနဲ့ဂျူးလိယက်ကိုအားကျလို့တော့ မဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့်စံချိန်တော့ချိုးချင်တယ်
ချိုမြိန်တဲ့မင်းအပြုံးနဲ့ နဖူးပေါ်ဝဲကျနေတဲ့မင်းဆံပင်လေးကို ထာဝရ နမ်းရှိုက်ချင်လို့
ပို့ သူ ခါးခါး ဒီချိန် 2:41 AM No comments:
နှလုံးသားနုနုပေါ်မှာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းစုတ်ချက်တွေနဲ့ရေးခြစ်ထားတဲ့ မင်းနာမည်
ပုံဖော်လို့မရသေးတဲ့ ဘ၀ခရီးအတွက် စီမံကိန်းတွေအက်ကြောင်းထပ်နေအောင် အိပ်ကူးအိပ်မက်တွေတည်ဆောက်ခဲ့
သိပ်ချစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကို တစ်ယောက်တည်း မင်းအတွက် ကန်ထရိုက်ဆွဲထားချင်မိတာ မိုက်ရူးရဲဆန်တယ်လို့မမြင်နဲ့
ခါးသီးတဲ့ ဘ၀မှာ ဆုံဆည်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် မင်းကို ပါးပါးလေးပဲလွမ်းချင်မိတာ ငါ့အတ္တပါ
နင့်နေအောင်ချစ်ခဲ့မိတဲ့ငါ့နှလုံးသားက အမှတ်သဲခြေမရှိဘူးလို့ပြောလည်း ခံယူယုံပဲ
ပုံပြောကောင်းတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ပုံပြင်ဆိုတာ အတိတ်ကဖြစ်ရပ်တွေကို ပုံတူကူးထားတဲ့ မိတ္တူတစ်စုံပါ
ခပ်ညံညံအတွေးတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ အချစ်ပုံရိပ်ကို ဘယ်တော့မှ မလှောင်ရီ ပါနဲ့
လေးနက်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့ မင်းအတွက် ငါရဲ့သစ္စာတွေက ချိုမြိန်မှုတွေပေးနိုင်မယ့် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ
မင်းပုံရိပ်ကို တစ်ဘ၀စာ သိမ်းဆည်းထားချင်တဲ့ ငါ့ memory တွေကို ခုတော့လည်း
ဗွီဇက်အိုထဲကပဲ လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်လေးနဲ့ ဖြေသိမ့်လိုက်တော့မယ်.....
ပို့ သူ ခါးခါး ဒီချိန် 2:40 AM No comments:
<< လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အလွမ်း>>
မင်းရဲ့အချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိုက်တဲ့ ငါက အလွမ်းတွေကိုနေ့စဉ်စားသုံးနေရတာ
ငါ့အချစ်ကမင်းနှလုံးသားမှာ www.(world wide web) ဖြစ်နေပြီချစ်သူ
ငါ့အချစ်ကိုကျော်ပြီးတော့ ဘယ်သူမှ မင်းနှလုံးသားထဲကို ၀င်မရတာ
မျှော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့ အချိန်နဲ့ဒီရေကို သောက်သုံးရင်း
ကတိသစ္စာ ဆီမှာ ငါကဦးစွာ အယူခံဝင်ထားတာ
နှိုးထခြင်းဆိုတဲ့ စိန်ခေါ်ပွဲကြီးကိုတော့ ငါမလွန်ဆန်နိုင်သေးဘူး
မျက်လုံးဖွင့်တိုင်း အသက်ရှုတိုင်း ငါ့နာမည်ကိုသာမင်းသတိရနေသေးရင်
ရင်ခုန်ရကျိုးနပ်ပါပြီ ငါရပ်တည်နေတဲ့ မြေပေါ်မှာပဲ မင်းရှိနေမယ်ဆိုရင်
သတိရခြင်းဆိုတဲ့ ခါးသီးတဲ့ဝေဒနာကို စားသုံးရင်း
ငါတို့ရဲ့ ၀ိညာဉ်လည်း နိဂုံးချုပ်လောက်ပြီချစ်သူ.....
ပို့ သူ ခါးခါး ဒီချိန် 2:39 AM No comments:
လူမှုရေးကို မရှိဘူး စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့
နှုတ်ဆိတ်နေရုံကလွဲပြီး ဖြေရှင်းချက်မရှိတော့တဲ့ အဖြေမဲ့ပုစ္ဆာကို
တရေးနှိုးတိုင်း တီးတိုးရေရွှတ်မိတယ် ခွင့်လွှတ်ပါလို့
ပို့ သူ ခါးခါး ဒီချိန် 2:35 AM No comments:
ချစ်သူနှလုံးသားထဲကအတွင်းလူဟာ (ငါ) ဆိုတာသေချာလား
အရမ်းချစ်တာပဲ အာဘွား တဲ့
ကျေးဇူးပဲချစ်သူ ဆောင်းမှာ မီးလှုံစရာမလိုလောက်အောင် နွေးထွေးသွားပြီ
အင့်ဟင်း- ကျောခိုင်းဖို့ ချစ်လာတာမဟုတ်ဘူး
အေးစက်လွန်းတဲ့လူတွေရဲ့ မျက်ဝန်းကို ရင်မဆိုင်ရဲလို့
မင်းကိုချစ်ရုံလေးပဲ ချစ်နေနိုင်တာ နားလည်ပေးပါ
ပို့ သူ ခါးခါး ဒီချိန် 2:23 AM No comments:
နှလုံးသားတခု ခပ်ယဲ့ယဲ့လေး ပြုံးလိုက်မိတယ်
အချစ်ဖြစ်နေမှန်း မသိခဲ့လို့ ပါ.........
လရိပ်အောက်မှာ တခါတခါ ခိုလို့ 
နှလုံးသားတခု ခပ်နုနုလေး ပြုံးလိုက်မိတယ်
အချစ်ဆိုတဲ့အရာမှန်း မသိခဲ့လို့ ပါ..........
သိလိုက်ပေမဲ့ကြိုးတချောင်းကို ပစ်လွတ်လိုက်ခဲ့ပြီ
အဲဒီကြိုးလေးက ငါ့ကိုချည်နှောင်ရင်း ..................
အချစ်ဆိုတဲ့ အရာ...................နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီ
အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ ????????????????????????
ပို့ သူ ခါးခါး ဒီချိန် 7:38 AM No comments: